Madoonaysaa In Habluhu Kaa Daba Dhacaan? Si Fadaan La I Moow! - Hablaha Media Network
HMN:- Jidhka dhis: Ma doonaysa inaad kalsooni naftaada u yeelatid? Sida kaliyah ee kalsooni lagu yeelan karo oo raga badankoodu ka fikiraan ayaa waxay tahay inaad tababar samaysid oo murqo quruxbadan yeelatid.
Tusaalooyin soo jiidasho leh.
Dhoolacadyntu waa habka kaliyah ee wax ku oolka ah ee ay isticmaalan raga dumarka badan shukaansada.
Dhoolacadayntu waxay gabadha ku abuuraysa kalsooni iyo in xidhiidh wanagsani idinka dhaxeeyo inta aad wada joogtan, iyo inay kuu malayso inad tahay wiil qosol badan oo waxa dhici karta inay sii jeclaysato dhoolacadayntaadaas.
Waayo taasi waxay dhisaysaa xiisaha ay kuu qabto o waxa laga yaaba inay haddana mar labaad kusoow acdo adigoon soo wicinba.